A steel guga guga sare 14 bla daab safeeyey waxay bixisaa xoog ka xoogbadan. Gacan-gashiga balaastigga ah ee ruxruxsan ayaa ku habboon qabashada xoog leh marka la isticmaalo，ayaa kaa caawin kara inaad si wanaagsan ugu isticmaasho dibadda.
Wax soo saarkeenu wuxuu noqon karaa caabbida miridhku ugu cimriga dheer iyo adkeysiga sare ee isla xaaladaha, waxaan noqon doonaa xulashadaada ugu fiican.
Shayga BS512MHY Summad Gemlight ama OEM / ODM
Qaabka Blade Round majarafad madax Cabbirka majarafad 235 * 300 * 970mm
Wadarta dhererka 970mm Qalabka Blade Badeecada Birta Kaarboon Sare leh ee Mn La Kobciyey / SAE1070
Daaweynta Kulaylka Ballaadhan Deminta Bidaarta iyo Cadaadiska Qalbi Adag HRC45-55
Tang buuxa Haa Baal Blade Adkaanta ugufiican, dabacsanaan iyo iska caabin.
Nooca Blade Edge Pre-Sharped Daaweynta dusha sare Buufiyo dahaarka leh / Madow ama kartoo
Badbaadinta madaxa majarafad Bacda PVC Dhumucdiisuna way 1.4mm
Faahfaahinta daab Aasaasiga aasaasiga ah aasaasay Majarafad & Gacan FNooca ixed Haya
Wadarta Miisaanka 1.5KG Wax ka qabato Qoryo
Gemlight Panga Machete waxaa badanaa laga isticmaalaa wadamada Caribbean-ka iyo Afrika. Caloosha dhexdeeda waxay siisaa culeys goynta iyo gogol xajinta jarista. Barta la rogay waxay xoogga saari kartaa aag yar oo dalool leh.
Maaddaama daab birta kaarboon sare ka xoog badan tahay birta birta-birta ah. Iyo sidoo kale baangadani waxay siineysaa daab bir ah oo kaarboon ah oo xajinaya fiiqnaan aad uga dheer nooc kasta oo module ah. Deminta iyo kuleylka taas oo ka dhigaysa galka buuxa inuu helo adkaansho iyo adkeyn dheeraad ah. Sidoo kale, daabku waa anti-miridhku sidoo kale wuxuu ku ilaaliyaa ilaalinta jaakad cad. Waa inaad qalajiso ka dib markaad si sax ah u isticmaasho.